कम्युनिष्ट सरकारलाई चीनको झड्का: यसपटक चीनले नेपाल बिर्सियो « The News Nepal
कम्युनिष्ट सरकारलाई चीनको झड्का: यसपटक चीनले नेपाल बिर्सियो
नेपाल यसपटक ‘बोआओ फोरम’ मा सहभागी नहुने भएको छ। चीनको हैनान प्रान्तमा हरेक वर्ष आयोजना हुने ‘बोआओ फोरम’ को सम्मेलनमा सहभागी हुँदै आएको थियो। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।गत मंसिरमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमा बोआओ सम्मेलन र बीआरआई फोरमको सम्मेलनमा नेपाललाई निमन्त्रणा गरिने बताइएको थियो।
प्रधानमन्त्री सहभागी नहुने भएपछि सम्मेलनमा नेपाललाई निमन्त्रणा नगरेको अनुमान कूटनीतिज्ञहरूको छ। फोरमको वार्षिक सम्मेलन आगामी मंगलबार सुरु हुँदैछ। सम्मेलनमा गत वर्ष राष्ट्रपति सी चिनफिङ सहभागी भएर बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्सको छुट्टै बहस गरेका थिए।
त्यही समयमा प्रधानमन्त्री ओली भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेकाले सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट कार्यकारी प्रमुख सहभागी भएनन्।यसपटक भने चीनले उक्त फोरममा नेपाललाई निम्तो गरेको छैन। परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले बोआओ फोरममा सहभागिताबारे बुझ्नैपर्ने बताए। उनले अहिलेसम्म कुनै तयारी नभएकाले भ्रमणको सम्भावना नरहेको जानकारी दिए। बोआओ फोरममा स्थापनादेखि नेपालका तर्फबाट तत्कालीन राजा सहभागी हुँदै आएका थिए।
०६२÷०६३ को परिवर्तनपछि पनि लामो समयसम्म नेपाललाई बोलाइएन। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि निम्ता आउन थालेको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सन् २०१५ मा बोआओ फोरममा सहभागिता जनाएका थिए। केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०१६ मा र पुष्पकमल दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०१७ मा सम्मेलनमा सहभागी भए।
नेपालतर्फ चिनियाँ पक्षको उच्चस्तरीय भ्रमण नभएको धेरै वर्ष बितेको छ। जियाङ जेमिनले सन् १९९६ को डिसेम्बरमा दुईदिने नेपाल भ्रमण गरेका थिए। २०१२ जनवरीमा प्रधानमन्त्री वेन जियावाओ पाँच घन्टाका लागि नेपाल आएका थिए। राष्ट्रपति हु जिन्ताओ दुई कार्यकालमा नेपाल आएनन्। राष्ट्रपति सी चिनफिङले पनि अहिलेसम्म नेपाल भ्रमण आवश्यक ठानेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा दुईपक्षीय सम्बन्धका केही समस्या आएको विश्लेषण कूटनीतिज्ञहरूको छ।
जथाभावी मूल्य बढेपनि कारबाही गर्न भने सरकार असफल
अचानक बढ्यो गर्मी आतंक : २० बालबालिकासहित ९१ जनाको ज्यान गयो !
स्वदेश फर्कँदै प्रम ओलीले भने–विरोध गर्ने ‘चान्स’ नखोजे हुन्छ, गुठी विधेयकमा भएको कमचोरी सच्याइन्छ
गफ, खाजा समय र भिक्षु सोच: कामको तनाव कम गर्ने उत्तम उपाय
आजको मौसम : मेघ गर्जन तथा हावाहुरी सहित वर्षा सचेत रहन मौसमविद्को अपिल !